ညဘက်တွေမှာ ဘာလို့ ခေါင်း ခဏခဏ ကိုက်ရတာလဲ? – For her myanmar
Posted on May 12, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(1)
ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှ ခေါင်း ကိုက်လာတာမျိုး ကြုံဖူးကြလား ယောင်းတို့ရေ?
တနေ့လုံးပင်ပန်းလာလို့ နားမယ် ကြံကာ ရှိသေး၊ ခေါင်းထဲက ထိုးကိုက်လာတာမျိုး၊ အိပ်နေရင်း ခေါင်းကိုက်ပြီး လန့်နိုးလာမျိုး က အတော်လေး စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်လည်း မဟုတ် နေ့စဉ်ရက်စက် ညဘက်ခေါင်းကိုက်နေရင်တော့ ပြဿနာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘာလို့ ညဘက်တွေမှာ ခေါင်းကိုက်လဲ ဘယ်လို ကုသရမလဲဆိုတာ အတူတူ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်..
ယေဘုယျအားဖြင့် ညဘက်ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာကိုအမျိုးအစား(၄)မျိုး ခွဲနိုင်ပါတယ်။Tension headache, Cluster headache, Migraines, နဲ့ hypnic headache ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ခေါင်းတစ်ခုလုံးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖိစီးထားသလိုမျိုး ၊ ညှစ်ထားသလိုမျိုး ကိုက်ခဲနေတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ tension headache ဟာ အဖြစ်များဆုံး ခေါင်းကိုက်ရောဂါတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး အပျော့စား ခေါင်းကိုက်တာကနေ အပြင်းစား ခေါင်းကိုက်တာထိ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ ဦးခေါင်းက ကြွက်သား တင်းနေတာ၊ အလွန်အကျွံပင်ပန်းရတာတွေကြောင့်ပါ။ တစ်ခါတလေမှာ သွားကြိတ်ခြင်းကလည်း tension headache ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အလွန်အကျွံ လုပ်ခိုင်းတာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ ဦးခေါင်းကြွက်သားတွေကို ဆေးပူလိမ်းပြီး မကြာခဏ နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ ရေပတ်ဝတ် သို့မဟုတ် ရေနွေးအိတ် ကပ်ပေးတာတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> နာတာရှည်ရောဂါအထိဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ခေါင်းကိုက်ရောဂါ
ဒါကတော့ အနာကျင်ရဆုံး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ Cluster headache ဟာ အဖြစ်နည်းတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်ထဲမှာပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ကိုက်ခဲနေတာမို့ clusters headache လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာဆိုရင် မျက်လုံးထဲ သို့မဟုတ် မျက်လုံးနား တစ်ဝိုက်မှာ အလွန်အကျွံ ကိုက်ခဲတာ၊ ချွေးပြန်လာတာ၊ မျက်ရည်ကျလာတာမျိုးနဲ့ ခေါင်းတစ်ဖက်ခြမ်းမှာ အုံခဲပြီး နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရတာမျိုး ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
Cluster headache ဟာ ရက်သတ္တပတ်ကနေ လတွေအထိ ကြာနိုင်ပြီး သူ့ကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းရယ်လို့ မရှိပါဘူး။
ပြင်းထန်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ရောဂါမို့ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဆရာဝန်ဆီ သေချာသွားပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူခြင်းအားဖြင့် cluster headache ခံစားနေရတဲ့ ကာလ တိုတောင်းသွားအောင် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တာပါ ယောင်းတို့ရေ…
ဒါကတော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာတခုပါ။ သူကတော့ ခေါင်းကိုက်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲအန်ချင်လာတာ၊ အလင်းရောင်စူးစူးတွေ၊ အသံဆိုးတွေကို မခံနိုင်တာ၊ အမြင်ဝေဝါးတာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ လိုက်လာတတ်ပါတယ်။
ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ MSG(အချိုမှုန့်) လို အစားအသောက်ထဲ ထည့်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် အပြင် သွေးဆုံးတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ၊ ရာသီကာလမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတာ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာ၊ အစားအစာတချို့ကြောင့်နဲ့ အိပ်ချိန်ပုံစံ ပြောင်းသွားတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Migraine ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင် ဒီတခုခုထဲက ဘယ်ဟာနဲ့များ ငြိနေမလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေအချက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ သက်သာစေရဖို့ရာ
4. Hypnic headache
သူကလည်း cluster headache လို အဖြစ်နည်းပြီး အသက်၅၀နောက်ပိုင်းတွေမှာပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူကတော့ အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှ ကိုက်တတ်ပြီး လူကို နိုးလာစေလို့ “alarm clock headache” (နှိုးစက်နာရီလို ခေါင်းကိုက်ခြင်း)လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ သူကတော့ ခေါင်းနှစ်ခြမ်းလုံး နာကျင်နေတတ်ပြီး တစ်ခါတလေဆို အန်ပါအန်တတ်ပါတယ်။ တစ်လမှာ ညဘက် ၁၀ရက်လောက်က ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အပြင် အိပ်ရာထထချင်း ၁၅မိနစ်ကနေ လေးနာရီလောက်ထိ ခေါင်းကိုက်နေတာမျိုးပေါ့။
Cluster headache လိုပဲ သူ့မှာ အကြောင်းရင်း တိတိကျကျ မရှိနိုင်တာမို့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့် လေ့လာချက်တွေအရ ညဘက်ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာကို အကောင်းဆုံးကုသနိုင်တဲ့ နည်းက တစ်နေ့ အိပ်ချိန် ၈နာရီပြည့်အောင် အိပ်ခြင်းပါ။ အိပ်တဲ့အချိန်ကနေ ည၂နာရီလောက်မှ အိပ်ပြီး မနက် ၁၀နာရီမှ အိပ်တာမဟုတ်ဘဲ ညဘက် ၁၁ခွဲလောက်ဆို ပုံမှန်အိပ်ပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါနော်..
ဒါပေမဲ့ ခေါင်းကိုက်တဲ့ ပုံစံ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ ပုံစံဆင်နေတာမို့ ဆေးမြီးတို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသလို့ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ရောဂါရှာဖွေတာက အထိရောက်ဆုံးပါ ယောင်းတို့ရေ….
Reference links: mayoclinic healthline
ညဘကျရောကျတဲ့အခါမှ ခေါငျး ကိုကျလာတာမြိုး ကွုံဖူးကွလား ယောငျးတို့ရေ?
တနလေုံ့းပငျပနျးလာလို့ နားမယျ ကွံကာ ရှိသေး၊ ခေါငျးထဲက ထိုးကိုကျလာတာမြိုး၊ အိပျနရေငျး ခေါငျးကိုကျပွီး လနျ့နိုးလာမြိုး က အတျောလေး စိတျညဈစရာကောငျးပါတယျ။ တဈရကျနှဈရကျလညျး မဟုတျ နစေ့ဉျရကျစကျ ညဘကျခေါငျးကိုကျနရေငျတော့ ပွဿနာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘာလို့ ညဘကျတှမှော ခေါငျးကိုကျလဲ ဘယျလို ကုသရမလဲဆိုတာ အတူတူ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျနျော..
ယဘေုယအြားဖွငျ့ ညဘကျခေါငျးကိုကျတဲ့ ဝဒေနာကိုအမြိုးအစား(၄)မြိုး ခှဲနိုငျပါတယျ။Tension headache, Cluster headache, Migraines, နဲ့ hypnic headache ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ခေါငျးတဈခုလုံးကို တငျးတငျးကွပျကွပျ ဖိစီးထားသလိုမြိုး ၊ ညှဈထားသလိုမြိုး ကိုကျခဲနတေဲ့ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာတဈခုပါ။ tension headache ဟာ အဖွဈမြားဆုံး ခေါငျးကိုကျရောဂါတှထေဲက တဈခုဖွဈပွီး အပြော့စား ခေါငျးကိုကျတာကနေ အပွငျးစား ခေါငျးကိုကျတာထိ ပုံစံအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။
ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ စိတျဖိစီးမှုမြားတာ၊ ဦးခေါငျးက ကွှကျသား တငျးနတော၊ အလှနျအကြှံပငျပနျးရတာတှကွေောငျ့ပါ။ တဈခါတလမှော သှားကွိတျခွငျးကလညျး tension headache ကိုဖွဈစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ ခန်ဓာကိုယျကို အလှနျအကြှံ လုပျခိုငျးတာတှကေို ရှောငျရပါမယျ။ ဦးခေါငျးကွှကျသားတှကေို ဆေးပူလိမျးပွီး မကွာခဏ နှိပျနယျပေးတာ၊ ရပေတျဝတျ သို့မဟုတျ ရနှေေးအိတျ ကပျပေးတာတို့ကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> နာတာရှညျရောဂါအထိဖွဈနိုငျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ခေါငျးကိုကျရောဂါ
ဒါကတော့ အနာကငျြရဆုံး ခေါငျးကိုကျဝဒေနာတဈခုပါ။ Cluster headache ဟာ အဖွဈနညျးတဲ့ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာဖွဈပွီး တဈဖကျထဲမှာပဲ ထပျခါထပျခါ ကိုကျခဲနတောမို့ clusters headache လို့ ချေါပါတယျ။ ဒီရောဂါဟာဆိုရငျ မကျြလုံးထဲ သို့မဟုတျ မကျြလုံးနား တဈဝိုကျမှာ အလှနျအကြှံ ကိုကျခဲတာ၊ ခြှေးပွနျလာတာ၊ မကျြရညျကလြာတာမြိုးနဲ့ ခေါငျးတဈဖကျခွမျးမှာ အုံခဲပွီး နာကငျြတဲ့ ဝဒေနာကို ခံစားရတာမြိုး ဖွဈစတေတျပါတယျ။
Cluster headache ဟာ ရကျသတ်တပတျကနေ လတှအေထိ ကွာနိုငျပွီး သူ့ကို ဖွဈစတေဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးရယျလို့ မရှိပါဘူး။
ပွငျးထနျတဲ့ ခေါငျးကိုကျရောဂါမို့ ဆေးမွီးတိုနဲ့ ကုလို့ မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး ဆရာဝနျဆီ သခြောသှားပွီး ဆေးကုသမှု ခံယူခွငျးအားဖွငျ့ cluster headache ခံစားနရေတဲ့ ကာလ တိုတောငျးသှားအောငျ ပွုလုပျဖို့ လိုအပျတာပါ ယောငျးတို့ရေ…
ဒါကတော့ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျခဲတဲ့ ဝဒေနာတခုပါ။ သူကတော့ ခေါငျးကိုကျရုံတငျမဟုတျဘဲအနျခငျြလာတာ၊ အလငျးရောငျစူးစူးတှေ၊ အသံဆိုးတှကေို မခံနိုငျတာ၊ အမွငျဝဝေါးတာ စတဲ့ လက်ခဏာတှပေါ လိုကျလာတတျပါတယျ။
ဖွဈတတျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ MSG(အခြိုမှုနျ့) လို အစားအသောကျထဲ ထညျ့တဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှကွေောငျ့ အပွငျ သှေးဆုံးတာ၊ ကိုယျဝနျဆောငျတာ၊ ရာသီကာလမှာ ဟျောမုနျးပွောငျးလဲတာ၊ ရာသီဥတုပွောငျးလဲတာ၊ အစားအစာတခြို့ကွောငျ့နဲ့ အိပျခြိနျပုံစံ ပွောငျးသှားတာတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Migraine ဖွဈခဲ့ပွီဆိုရငျ ဒီတခုခုထဲက ဘယျဟာနဲ့မြား ငွိနမေလဲဆိုတာ ဆနျးစဈပွီး ဖွဈနိုငျခအြေခကျြတှကေို ရှောငျကွဉျခွငျးအားဖွငျ့ ကုသနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ခေါငျးကိုကျဝဒေနာ ဆေးသောကျစရာမလိုဘဲ သကျသာစရေဖို့ရာ
သူကလညျး cluster headache လို အဖွဈနညျးပွီး အသကျ၅၀နောကျပိုငျးတှမှောပဲ ဖွဈတတျပါတယျ။ သူကတော့ အိပျပြျောသှားတဲ့အခြိနျမှ ကိုကျတတျပွီး လူကို နိုးလာစလေို့ “alarm clock headache” (နှိုးစကျနာရီလို ခေါငျးကိုကျခွငျး)လို့လညျး ချေါကွပါတယျ။ သူကတော့ ခေါငျးနှဈခွမျးလုံး နာကငျြနတေတျပွီး တဈခါတလဆေို အနျပါအနျတတျပါတယျ။ တဈလမှာ ညဘကျ ၁၀ရကျလောကျက ခေါငျးကိုကျနတေဲ့အပွငျ အိပျရာထထခငျြး ၁၅မိနဈကနေ လေးနာရီလောကျထိ ခေါငျးကိုကျနတောမြိုးပေါ့။
Cluster headache လိုပဲ သူ့မှာ အကွောငျးရငျး တိတိကကြ မရှိနိုငျတာမို့ ဆရာဝနျဆီသှားပွီး ဆေးကုသမှု ခံယူတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ လလေ့ာခကျြတှအေရ ညဘကျခေါငျးကိုကျတဲ့ ဝဒေနာကို အကောငျးဆုံးကုသနိုငျတဲ့ နညျးက တဈနေ့ အိပျခြိနျ ၈နာရီပွညျ့အောငျ အိပျခွငျးပါ။ အိပျတဲ့အခြိနျကနေ ည၂နာရီလောကျမှ အိပျပွီး မနကျ ၁၀နာရီမှ အိပျတာမဟုတျဘဲ ညဘကျ ၁၁ခှဲလောကျဆို ပုံမှနျအိပျပေးတာမြိုးကို ဆိုလိုတာပါနျော..
ဒါပမေဲ့ ခေါငျးကိုကျတဲ့ ပုံစံ တဈခုနဲ့ တဈခုဟာ ပုံစံဆငျနတောမို့ ဆေးမွီးတို နညျးလမျးတှနေဲ့ ကုသလို့ မပြောကျရငျ ဆရာဝနျဆီသှားပွီး ရောဂါရှာဖှတောက အထိရောကျဆုံးပါ ယောငျးတို့ရေ….
Tagged Headache, Health, Knowledge, Night, reasons, why
Posted on September 11, 2018 Author မယ်တင် (ဆေး-၁)
Posted on May 21, 2017 Author Christina Rosy
ယောင်းသာ တစ်နှစ်လောက် ရေမချိုးပဲနေရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ ညစ်ပေတုံးတွေ သိထားဖို့လိုပြီနော်။
Posted on January 31, 2018 Author Nandar
သူ့ကိုလည်းမမှတ်​မိဘူး .. နင့်​ကိုလည်း မမှတ်​မိဘူး … တစ်​ခါတစ်​လေ ကိုယ့်မျက်​နှာကိုယ်​​တောင်​ ​မေ့​နေတယ်​ -_-